Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin Oo La Wareegay Sabuun. – Calamada.com
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin Oo La Wareegay Sabuun.
Fiidkii hore ee caawa waxey ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin weerar culus ku qaadeen isbaaro maleeshiyaatka dowlada federaalka ay dhigteen Buundada Sabuun ee dhacda duleedka degmada Jowhar ee gobalka Shabeelada dhexe.
Dagaalka markii muddo kooban uu socday ayeey maleeshiyaatka dowlada federaalka isaga carareen Buundada kuwaasi oo u baxsaday dhanka degmada Jowhar.
Idaacada Islaamiga Andalus oo soo xiganeysa saraakiil ka tirsan Mujaahidiinta ayaa baahisay in ciidamada Shabaabul Mujaahidiin si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta Buundada Sabuun.
Dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay iney arkeen meydka hal askari oo ka tirsan maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka kaasi oo Qorigii uu watay ay gacanta ku dhigeen ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Labo maalin ka hor ayeey aheed markii tiro askar ah dowlada federaalka dhimasho iyo dhaawac kaga noqotay’gaari Qooqan ahna looga gubay weerar dhabba gal ah oo ka dhacay duleedka deegaanka Biyo cadde ee gobalka Shabeelada hoose.
Previous: Maleeshiyaatka Suufida Oo Boqolaal Ruux Ka Raafay Degmada Guriceel.
Next: Halkan Ka Dhageyso Faafreebka Wararka 06-06-1438Hijri.